I'm Ping Pong King :) 2.8 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.8 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား I'm Ping Pong King :)
I'm Ping Pong King :) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
"ငါသည် Ping Pong ကဘုရငျပေါ့" ဟာအလွန်ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စားပွဲတင်တင်းနစ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်း၏ရည်မှန်းချက် 16 ပြိုင်ဘက်ရိုက်နှက်နှင့်ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုအနိုင်ယူရန်ဖြစ်၏ ဤအရယ်စရာ stickmen ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးချန်ပီယံ, သင့်သူဌေးသို့မဟုတ်စူပါအဖွားအိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလွယ်ကူတဲ့လက်ညှိုးကိုပုတ်ဂိမ်းရဲ့ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ stickman ထိန်းချုပ်ဖို့မျက်နှာပြင်ရဲ့ညာဘက်သို့မဟုတ် left ထိပုတ်ပါ။ မည်သည့်ဘောလုံးကိုလက်လွတ်ဖို့မသတိထားပါ, ဒါမှမဟုတ်သင်ဤပြိုင်ပွဲကျရှုံးမယ်!
•ရိုးရှင်းစွာအပု stickman ထိန်းချုပ်ဖို့မျက်နှာပြင်ထိပုတ်ပါ။
•တစ်ခုချင်းစီကိုပြိုင်ဘက်ကသူတို့ကိုအနိုင်ယူရန်ပြိုင်ပွဲအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကွဲပြားခြားနား Ping Pong ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်!
တင့်တယ်အဝါရောင်နောက်ခံနဲ့ရယ်စရာ stickman •
• Crazy Ping Pong ကဘုရငျကခုန်ကာတွန်း
•သင့်တုံ့ပြန်မှု & စားပွဲတင်တင်းနစ်ကျွမ်းကျင်မှု Enhance
•ကမ္ဘာတဝှမ်းစိန်ခေါ် 16 လှည်ပြိုင်ဘက်!
Ping Pong ကစားရန်•ကို Creative လမ်း
သငျသညျကမ္ဘာတဝှမ်း 16 ပြိုင်ဘက်ရိုက်နှက်နှင့်အဆုံးစွန် Ping Pong ဘုရငျဖွစျနိုင်သလား?
I'm Ping Pong King :) အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
I'm Ping Pong King :) အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
I'm Ping Pong King :) အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
I'm Ping Pong King :) အား အခ်က္ျပပါ
skinnyboi စတိုး 13 14.68k
I'm Ping Pong King :) ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း I'm Ping Pong King :) အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.8
ထုတ်လုပ်သူ Orangenose Studio
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.orangenosestudio.com/privacy.html
Release date: 2019-08-10 06:21:04
လက်မှတ် SHA1: A4:38:B8:1D:81:BD:DD:FD:30:E5:BF:E6:95:AC:CD:13:26:61:18:3C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jackie Chang
အဖွဲ့အစည်း (O): orangenose studio
I'm Ping Pong King :) APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ